Odoyaasha KGS oo sheegay in ay bilaabeen diyaargarowga
Odoyaal dhaqameed soo xulaya Ergada dooraneysa Xildhibaannada Golaha Shacabka BFS ayaa bilaabay howsha ay isugu duwayaan Ergo beeleedyada leh kuraasta Aqalka hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxgaradkaan ayaa labo cishe kahor la kulmay Hogaamiyaha DG Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen, iyaga oo isla meel dhigay sidii loo bilaabi lahaa diyaargarowga doorashada Baarlamaanka Federaalka.
Labo qaybood ayaa look ala qaybiyay Odoyaashaan oo 15-kamid ah ay kasoo jeedaan Gobolka Shabeelaha Hoose, iyaga oo soo xulaya Ergo beeleedyada soo dooranaya 26-kursi oo doorashado loogu qabanayo Magaalada Baraawe, halka Odoyaasha kasoo jeeda Gobollada Bay & Bakool ay soo dooranayaan 43-Xildhibaan.
Odoyaasha Baraawe Xarunta DG KGS waxaa horyaalla kuraasta Doorashadooda ee la dhigay Magaaladaasi, waxa ay bilaabeen diyaarinta Ergo beeleed gaareysa 2,626-ruux guud ahaan, maadaama kursi waliba doorashadiisu laga doonayo 101-ruux sida ku xusan heshiiskii laga gaaray Doorashada.
Dhanka Magaalada Baydhabo oo ah xarunta KMG ah Koofur Galbeed waxaa guud ahaan ka imaanaya 4,343-ruux oo ah Ergada beelaha ee dooraneysa kuraasta Baarlamaanka Federaalka ee saami ahaanta ugu soo aaday Gobollada Bay & Bakool.
Qaar kamid ah Odoyaashii la kulmay Madaxweyne Lafta gareen ayaa sheegay in ay guda-galayaan soo diyaarinta Ergo beeleedyada si maamulkaas uu u noqdo Dowlad Goboleedkii ugu horeeyay ee soo gudbiya Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka 20/24.
Odoyaasha waxaa kulamada & kor joogteyntaba ku haya Madaxweyne Lafta gareen oo matalaya Gobollada Bay & Bakool, halka Gobolka Shabeelaha Hoose uu u taagan yahay Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas Danjire Cali Siciid Faqi oo kursiga uu ku fadhiyo ku matalo.
Newsroom 115 posts
Tunisian authorized to remove a reference to slavery from his surname
tens of thousands of flood victims in the north